काठमाडौंमा अचनाक किन बढ्यो चहल पहल ? – Khabarhouse
Khabar house | २ असार २०७८, बुधबार १६:१९ | Comments
काठमाडौं : बुधबार थप २ हजार ८२८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कुल १३ हजार २२ जनाको परीक्षण गर्दा सो संख्याका संक्रमित थपिएका हुन् । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५२ जनाको संक्रमणका कारण मृ,त्यु भएको छ। हालसम्म ८ हजार ५५८ जनाको मृ,त्यु भएको छ। आज ३ हजार ८२ जना मुक्त भएका छन्।
हालसम्म को’रो नाबाट निको हुनेको संख्या ५ लाख ४३ हजार ५२१ रहेको छ। आजसम्म कुल संक्रमित भएकामध्ये ८८.४९ प्रतिशत निको भएको, १०.१२ प्रतिशत सक्रिय रहेको र १.३९ प्रतिशतको मृ,त्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।त्यस्तै सङ्क्रमणको मृ,त्यु दर घट्दै गएपछि भक्तपुर जिल्लाका अस्पतालका श्यया खाली हुन थालेका छन् । अस्पतालमा अक्सिजन अभाव घटेर उपचारमा सहज हुन थालेको छ ।
सङ्क्रमितको निको हुने दर पनि ह्वात्तै बढेको छ । पिसिआर परी’क्षणका लागि आउनेको संख्या पनि घटेको छ । कोभिड–१९ को दोश्रो लहरको महामारीले उग्र रुप लिँदा भक्तपुर अस्पतालमा एकैदिन कोभिडका ८३ जनासम्म बिरामी राखेर उपचार गरिएको थियो भने आज यस अस्पतालमा २२ जना कोभिडका विरामीको उपचार भइरहेको छ ।
भक्तपुर अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ड डा. सुमित्रा गौतमले छ शय्या आइसियु, छ शय्या भेन्टिलेटर र ४६ शय्याको एचडियु तथा को’भिड आकस्मिक कक्षसहित एकै दिन ८३ जना को’भिडका बिरामी राखेर उपचार गरेको कहालीलाग्दो अवस्था पार गर्दै आए को बताईन । को’भिडका बिरामीको उपचार गर्दै आएको मध्यपुरथिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरियामैत्री नगरपालि अस्पतालमा पनि सङ्क्रमित घटेपछि श्यया खाली हुन थालेका छन् ।
एकै पटक ५२ जनासम्म को’भिडका बिरामीको उपचार गरेको यो अस्पतालमा आज आठ जनाको मात्रै उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका प्रशासन अधिकृत रुपेश श्रेष्ठले बिरामीको चाप घटे पछि आज तीन जना भेन्टिलेटरमा र पाँच जना एचडियुमा उपचाररत रहे को बताईन । अहिले गत महिनाको जस्तो अस्पतालमा आइसियूको हाहाकार भएको स्थिति छैन। उक्त बेला उपत्यकाकै सबैजसो अस्पतालमा आइसियू भरिएका थिए।
कति अस्पतालले त आइसियू भरिएपछि विरामीलाई बाहिरै राखेर उपचार समेत गरेका थिए। अहिले भने अस्पताल बाहिर राखेर सं’क्रमितको उपचार गर्नुपर्ने स्थिति छैन। उपत्यकाकै हकमा अहिले पनि सबैजसो अस्पतालको आइसियू भरिए पनि गत महिनाको जस्तो हाहाकारकै स्थिति भने छैन। अस्पतालहरूले अहिले दुई चार जना आइसियू चाहिने विरामीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाएका छन्।
यसरी नै संक्रमण सुधार हुँदै गए अबको दुईदेखि तीन सातासम्ममा सिकिस्त विरामीको चाप आधा घट्ने अस्पतालहरूको भनाइ छ। उपत्यकाको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको पसलमा चहलपहल बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा असार १ गतेदेखि लागु हुने गरी निषे धाज्ञाको नयाँ मोडल लागू भएको छ । परिवर्तित नियमअनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पसललाई बिहान ११ बजेसम्म खोल्न दिइएपछि किराना तथा खाद्यान्न पसलहरूमा चहलपहल बढेको हो ।
यसअघि बिहान ९ बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यक पसल खोल्न दिइएको थियो । असार १ गतेदेखि भने बिहान ११ बजेसम्म खोल्न दिइएको हो । ९ बजेसम्म पसल खोल्न दिँदा उपभोक्तालाई सामग्रीहरु पुर्याउन गाह्रो भएको भएपनि अहिले भने अलि सहज भएको ललि तपुर लगनखेलमा व्यापार गरिरहेका जगन्नाथ जोशी बताए । सरकारले परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने उनले बताए ।
देशभर हाल १ हजार १ सय ८० जना संक्रमित अस्पतालको आइसीयू र भेन्टिलेटरमा छन्। ९६७ आइसीयू र २८५ जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि मंगलबार १ हजार २ सय ५२ जना संक्र’मित आइसीयू र भेन्टिलेटरमा थिए।